Ooliyaad Siyyum, Pireezidaantii Mana Murtii Godina Addaa Naannawaa Finfinneetti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOoliyaad Siyyum, Pireezidaantii Mana Murtii Godina Addaa Naannawaa Finfinneetti.
Ooliyaad Siyyum, Pireezidaantii Mana Murtii Godina Addaa Naannawaa Finfinneetti.
Abbaan Seeraa kun nama ogeessa Jabaa qabu Aantummaan fi quuqamaan saba isaa tajaajilaa jiru dha. Ogeessi kun ogeessa seeraa fi hoogana mana murtii olaanaatis waan ta’eef itti gaafatamummaa olaanaatu irra jira.
Yoo yaadattan Tiba manneen seeraan alaa laga xaafootti diigaman san Habashoonni bulchiinsa magaalaa laga xaafoo fi bulchiinsa naannoo keenyaa yeroo sanii irratti si’a himata saaquuf dhama’aa turan Hojii seeraa boonsaa hojjete. Gaheen isaas daangaa seeraa fi naamusa itti gaafatamummaa keessatti Waan jabaa dalaguu dha. Kanumas hojjechaa turee jiras.
Ammas hojiin inni hojjechaa jiru akka salphaatti ilaaluun yaada faallaa fi qeeqa madaalawaa hin taane irratti oofuun sirrii miti. Jabaa ofii abbaatu tikfata. Ofirraa dhiibnee kaambii birootti dhiibuun bu’aa hin buusu. Ooliyaad jabaa keenya dha. Dhiibbaa hedduu keessattis hojiin godina kana keessatti, gama mirga hidhamtoota siyaasaatiif mirga heeraaf seeraa kabachiisuu, dalagamaa jiru Godina kamuu keessatti hin dalagamne. Galata kennineefii daranuu jajjabbeessuun dahoo ta’uufii qabna malee dhiibuun sirrii miti.
Kanaaf, ogeessa kana irratti olola oofuu dhiisuun gaariidha.
Oliyaad Jabaadhu kakuu mana barnoota seeraatti fi caffee duratti galte guutummaatti hojiirra oolchuuf mudhiikee jabeeffadhu.
Magaalaa Roobeetti makkalaakaayan Qarshii 100,000 ol Nama Harkatti Yoo arge Saamaa jira! “Abbaan qabeenyaa Tokko Qarshii 180,000 qabatee Qamadii Bituuf Osoo Deemuu Waraanni Harkatti argee Qarshii 100,000 ol Harkatti qabatanii Deemuun Doorkameera yooka Qarshii 80,000 irraa Nuuf kenni Yooka Hunda sirraa Fudhannna Jechuun qar 80,000 irraa fudhatanii Gad dhiisan! Hattuun Hattoota akka isaatif hayyamee Ummata Keenna saamsisaa jira!
Ergaa #Ariifachiisaa kana Woliif Dabarsaa!
“Zak Ani Ajajaa Poolisii aanaa tokkooti . Hanga Irreechi darbuuf #Qeerroollee Jajjaboo waa sochoosuu danda’an bakka hundaa hanga Irreechi darbuuf Gaafii tokko malee akka #hidhamanii turaniif ajaajni zoonii irraa nutti kennamee jira. Worri Zoonii Ajaja Naannoo irraa nutti kenname jedhu. Worri naannoo kallatii paartiin keenya kaa’e jedhu.
-Wonti Hedduu nama sodaachiisu waa’ee Dhibee #COVID19 haasawa oolan,garuu bakki itti hidhaman hin jiruu yammuu jennuun ajajni olii dhufe,feetan mana keessanitti hidhaa nuun jedhan.
-Kanaaf akka nama sabaaf quuqamu tokkoo Qeerroo fi Qarreen hundi bakka jiranitti akka ofi eeggannaan socha’an itti nuuf dhaami”
ልደቱ አያለው የተከሰሰበት አዋጅ ልደቱን አያስጠይቀውም።